Nihemotra i Taylor Swift ary niverina niaraka tamin'ny mozikany tany Spotify | Vaovao momba ny gadget
Nihemotra i Taylor Swift ary namerina ny mozikany tany Spotify
Taorian'ny taona maro tsy nisian'ny fifandraisana, ilay mpihira malaza Taylor Swift, izay nisintona ny mozikany avy tao Spotify satria ny tetikasan'izy ireo maimaim-poana dia manambany ny asan'ny artista, sy ny serivisy fitaterana mozika, dia nilamina. Ary tsy vita fotsiny.
Raha ny ekipan'i Taylor Swift manokana dia nanamafy tamin'ny alàlan'ny hafatra iray tao amin'ny Twitter, ny mozika an'ny mpihira rehetra dia misy amin'ny "serivisy streaming rehetra" izay misy, ankoatry ny Spotify, sehatra hafa izay tsy nisy azy toy ny Tidal na Amazon Music.
Araka ny navoaka Ny medium Recode, loharanom-baovao tsy fantatra dia nanambara fa ny kintan'ny mozika sy ny serivisy streaming mozika dia nahavita fifanarahana arak'izany ny mpampiasa Spotify rehetra dia ho afaka hihaino ny hirany rehetra, na amin'ny kinova maimaimpoana na karama.
Taylor Swift dia iray amin'ireo kintana mozika lehibe indrindra amin'izao fotoana izao ary, noho izany, iray amin'ireo be karama indrindra; ary Spotify no serivisy fandefasana mozika lehibe indrindra eran-tany, misy mpanjifa maherin'ny 50 tapitrisa ary farafaharatsiny 50 tapitrisa hafa mampiasa ny kinova maimaimpoana (ho takalon'ny dokam-barotra) ny serivisy. Ary araka ny efa nolazainay, io safidy malalaka io no niandohan'ny disadisa teo amin'i Swift sy Spotify.
Tamin'ny 2014, Swift nilaza tamin'ny Wall Street Journal fa "Ny zavatra sarobidy dia tsy maintsy aloa." Fotoana fohy taorian'izay dia nanala izy ny rakikirany "1989" avy amin'ny Spotify, arahin'ireo ambiny mozika, ary tsy hita intsony nanomboka teo.
Herintaona taty aoriana dia niditra izy ady hevitra amin'ny Apple Music ento ny artista ho an'ny mpanakanto; Tsy tian'ilay mpihira ilay fe-potoana malalaka telo volana natolotry ny serivisy paoma manaikitra ho an'ireo mpampiasa vaovao ary tsy hiampangana azy ireo koa ny mpanakanto, na dia marina aza fa, nanomboka tamin'io fotoana io dia somary lehibe kokoa ny isan-jato naloan'ny Apple Music noho izay naloan'i Spotify. Ary farany, nahavita fifanarahana ny Apple Music sy i Taylor Swift: hitaky vola ireo mpanakanto mandritra ny telo volana voalohany amin'ny fitsapana ny Apple Music, ka tafiditra ao anaty katalaoginy ny mozikan'ilay mpihira. Ity fifanarahana ity dia nahitana hetsika fampiroboroboana sasany nataon'i Swift, toa an'io doka io, na dia nianjera tamin'ny treadmill aza izy, dia tsy nahasakana ny nihira.
Maninona i Swift izao no tsy tia ny drafitra maimaim-poana Spotify ho mistery, sa tsy izany? Araka ny fitenenana, "ny lehilahy matanjaka dia fanomezana vola".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Nihemotra i Taylor Swift ary namerina ny mozikany tany Spotify
Mpiasa Samsung iray amin'ny seza misy kodiarana mangalatra finday efa ho iray tapitrisa dolara